Luiz: ‘Dabaal Deggi Maayo Caawa Haddaan Chelsea Gool Ka Dhaliyo..
HomeChampions LeagueLuiz: ‘Dabaal Deggi Maayo Caawa Haddaan Chelsea Gool Ka Dhaliyo..
Kalmadihii ugu horeeyey ee uu David Luiz bartay markuu u soo wareegay Chelsea ayaa waxaa kamid ahayd weedha ‘geezer’oo ah eray suuqdi dhalinyarada wiilasha ahi isugu yeedhaan ama baaq ahaan u isticmaalaan ‘Yarka” oo kale. Xagaagii ina dhaafay laacibka reer Brazil wuxuu ka dhaqaaqay garoonka Stamford Bridge isagoo ugu wareegay naadiga Paris St-Germain qiime lacageed oo lagu sheegay £50m, Luqadii yarayd ee uu korodhsaday intii uu naadiga joogay isagoo isticmaalaya ayuu ka sheekeeyey dareenkiisa ciyaarta The Blues ay iska hor imanayaan Maanta.
Luiz ayaa wajahaya kooxdiisii hore ee Chelsea markii ugu horeysay kulanka wareega 16 ka ee PSG ay isaga hor imanayaan , ciyaar Is araga koobaad ee horyaalka naadiyada Yurub ” Champions League first leg” ah maanta.
“Waxaan rajaynayaa, gurigan, inaan ku soo gallay lacag ka badan £50m,” ayuu yidhi Luiz. “Waxaan doonayaa inaan soo bandhigo kubada cagta een xirfadeeda leeyahay maalin walba iyo shaqada aan u qabto naadigan.”
“Haddii aan ka dhaliyo Chelsea, Ixtiraam ahaan, dabaal deggi maayo, laakiin waan faraxsanaanayaa.”
Arsenal Oo Maraqeeda Cabtay Hull – Kaalinta 2 aadna Ka Cidhiidhsanaysa City
Barcelona: 12 Kulan Ayaa Kooxaha Ka Soo Horjeeda Casaan La Siiyey Xili Ciyaareedkan
01/05/2016 Abdiwahab Ahmed
Suuqa Ciyaartooyayada Yurub: Heshiisyadii Ugu Fiicnaa Oo La Reebay England